We provide Myanmar Fb Font 2.0 APK file for Android 2.0+ and up.
Please be aware that We only share the original and free pure apk installer for Myanmar Fb Font 2.0 APK without any modifications.
If you want to know more about Myanmar Fb Font then you may visit ShweAppStore support center for more information
please contact us. Myanmar Fb Font is the property and trademark from the developer ShweAppStore.
ဖေ့ဘုတ်မှာ မြန်မာစာမမှန်တဲ့ ဖုန်းတွေကို မြန်မာစာအမှန်မြင်ရ ဖတ်ရအောင် ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။
Myanmar Fb Font ကို အသုံးပြုရန် Root မလိုပါဘူး Font Style ပါပြီး Font လက်ခံတဲ့ ဖုန်းတွေမှာ သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။
ဖောင့်သွင်းမည် ကို တစ်ချက်နှိပ်ပြီး Myanmar (iFont) ကို Install လုပ်ပါ။
ပြီးရင် ဖောင့်ပြောင်းမည့် ကို တစ်ချက်နှိပ်ပြီး ခုဏက Myanmar(iFont) ကို ရွေးပေးလိုက်ရင် Facebook မှာ မြန်မာစာမှန်ကန်နေပါပြီ။
Font လက်ခံတဲ့ ဖုန်းတွေမှာ သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။
Package Name: com.akh.mmfbfont
Rate 4.64 stars – based on 14 reviews